लक्ष्मी मल्ल र प्रमोम खरेलको ‘विद्यानाश’ चर्चामा (भिडियोसहित)::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
लक्ष्मी मल्ल र प्रमोम खरेलको ‘विद्यानाश’ चर्चामा (भिडियोसहित)
आइत, फाल्गुन २५, २०७६
काठमाडौं । चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका लक्ष्मी मल्ल र लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेलको आवाजमा रहेको लोकदोहोरी गीत ‘विद्यानाश’ ले अत्यधिक माया पाएको छ । सेल्फीबाट आफुलाई गायिकाको रुपमा स्थापित गराउन सफल गायिका मल्लको आवाजलाई यस गीतमा निकै मन पराईएको छ ।
साथै आधुनिक र चलचित्र गीत गाउदै आईरहेका युवाजगतका सर्वप्रिय गायक प्रमोद खरेलको भने यो पहिलो लोकदोहोरी गीत हो । पछिल्लो समय गीत चर्चामा रहेको अथथा रुचईएको थाहा पाउने माध्यम बनेको टिकटकमापनि यो गीतलाई अत्यधिक प्रयोग गरिएका् छ ।
रुचाईएको छ । उक्त गीतमा श्रीकृष्ण बम मल्लको संगीत र कृष्ण केसीको शब्द रहेको छ। संख्यात्मक हिसावले थोरै भएपनि उत्कृष्ट गीत गाएर सबैको मन जित्न सफल गायिका मल्लको यो भन्दा अगाडिको गीत लोभी आखालाईपनि अत्यधिक रुचाईएको छ । मेला, महोत्सव, पिक्नीकजस्ता सांगेतिक कार्यक्रमहरुमापनि यो गीतलाई रुचईएको छ ।
तिम्रो माया मुटु मा धेरै छ
माया भन्ने चिज पनि के रैछ
धरोधर्म धरोधर्म बिद्यानाश ढॉटेको छैन
मत तिम्रो भैसके साननानी बिद्यानाश आफुआफ्नो रैन
एकछिनपनि तिमीलाई नदेख्दा
मुटुको चाल रोकिन्छ नभेट्दा
मत तिम्रो भैसके ए कान्छा बिद्यानाश आफुआफ्नो रैन
गीतमा समेटिएका यी शब्दले आफुले माया गरेको मान्छेलाई धेरै माया गर्छु भनेर बिश्वास दिलाउन खोजिएको भावलाई समेटिएको छ ।
कलाकार पल शाह र बेनिशा हमालको अभिनय तथा नृत्य रहेको गीतलाई १२ लाख बढिले हेरेका छन् ।
भिडियोलाई कोरियोग्राफी तथा निर्देशन शिव बिकले गरेका छन। उत्सव दाहालले खिचेको भिडियोमा इन्टेन्स इल्डको सम्पादन रहेको छ। भिडियोमा सुप्रीम पराजुलीको कलर ग्रेडिङ रहेको छ।
“आफ्नो मन” युटुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको गीतलाई पहिलेको चर्चित गीत “लोभी आँखा”लाई झैँ दर्शक स्रोताले रुचाउनेमा विश्वस्त रहेको निर्माण टिमले जनाएको छ।
खाडीको रोजगारि बन्द भयो भने नेपालीले के खान्छन् ? विदेश जाने होईन, देश लुटेराहरुसंग भिड्ने मानसिकतामा फर्कनुनुहोस् !
कोरोना भाइरस बिरुद्धको अभियान : निरासामात्र हैन यस्ता छन् १६ शुभ समाचार
सभापति देउवा : एमसीसी जति ठूलो सहयोग अहिलेसम्म आएका छैन, यसमा विरोध गर्नु हुँदैन